မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း။ အကောင်းရှိသလိုအဆိုးရောရှိနိုင်သလော? « EcoBurma – travel to Burma / Myanmar
လွန်ခဲ့သောလများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအပြောင်းအလဲများအ နက် အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲမှာ နိုင်ငံခြားသားများကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွါးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်ရန်နှင့် ငွေများပိုဝင်လာစေရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ပိုမိုဝင် ရောက်လာစေရန် ကြိုးပန်းခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိုလုပ်ငန်းအတွက် အလွန်ကိုအသင့်အနေအထားတွင်ရှိမနေသေးပေ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် သုံးသိန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၁၉သန်းနှင့် ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ တံခါးဖွင့်ပေးရုံနှင့် မလုံလောက်ကြောင်း အစိုးရ နားလည်သွားပုံရပါသည်။ တာဝန်သိသော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း မူဝါဒတရပ်ချမှတ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်းသည် မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်း ပေါ်လှမ်းလိုက်သော ခြေတလှမ်းဖြစ်သည်မှာ သေချာလှပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အသွားနှစ်ဘက်ပါသော ဒါးတလက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးစီးပွါးခံစားရမှာဖြစ်သလို ပြဿနာတွေကိုလည်း သယ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ရန်မှာ အလွန်အရေးပါပါသည်။ ဤပြဿနာသည် မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်း၏ ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာလှည့်များအတွက် အပန်းဖြေစခန်းများ တည်ဆောက်လာသော မြို့များတွင် ဈေးနှုံးများကြီးလာပြီး မိမိတို့အတွက် လက်လှမ်းမမီတော့သဖြင့် ဒေသခံများ မိမိတို့မြို့ကို စွန့်ခွါသွားရမှုများ နေရာအများအပြားတွင် ကြုံခဲ့ရသည်ကို ကျနော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ ၀င်ရောက်လာလျှင် အသေးစား မိသားစုစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကလေးများ ကွယ်ပျောက်သွားရမှုများသည်လည်း မြန်မာတနိုင်ငံတည်းသာမဟုတ် အများအပြားပင်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများအပြား ၀င်ရောက်နေသော နေရာများရှိ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော သက်ရောက်မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြုံရနိုင် လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်ဟူသော အချက်ကို ယုံကြည်လက်ခံလာအောင် ပြောဆိုသည့်အမှားမျိုးကို မကျူးလွန်သင့်ပါ။
လူဦးရေ ၅၀၀ သာရှိသော ကော်စတာရီကာနိုင်ငံရှိ တာမာရင်ဒို (Tamarindo) ဆိုသည့် မြို့ကလေးသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ငါးထောင် ၀င်ရောက်လာသောအခါ ဒေသခံ တဦးဖြစ်သည့် ဒီဒီယာအာဆီဗီဒို (Didier Acevedo) ကြုံရသည့် အဖြစ်ကို အောက်ပါ ဗွီဒီယိုတွင်ကြည့် ပါ။
ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့် နောက်ထပ် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပြဿနာများ။
အသွားအပြန်ခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်းများ၊ ဒေသတွင်းခရီးစဉ်များ၊ ဟိုတယ်အခန်းနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းများ စသည့် နိုင်ငံခြားကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတို့အတွက် အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်အစအဆုံးကို ယင်းတို့လာရောက်သည့်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားအေဂျင်စီများကပင် စီစဉ်ပေးလိုက်သည်ဖြစ်ရာ ခရီးသည်များယူဆောင်လာသည့်ငွေများ အနက်အတော်များပြားသော ရာခိုင်နှုံးသည် ယင်းတို့နိုင်ငံရင်းသို့ပင် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီး ယင်းခရီးသွား အေဂျင်စီများနှင့် လုပ်ငန်းတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများက အနည်းငယ်သာရရှိခြင်းမျိုးကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် မြန်မာ့စီးပွါးရေးကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းက အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့ လာရာပင်ရင်းနိုင်ငံများကိုသာ အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံများ ထံသို့ လက်ကြားယိုရောက်ရှိလာမည့် ငွေပမာဏမှာလည်း များလှမည် မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများအပြားအတွက် သူတို့နိုင်ငံနှင့်နှိုင်းစာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အလွန်ဈေးချိုသော နိုင်ငံဖြစ်နေသည်။ ဟိုတယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ထိုခရီးသွားဧည့်သည်တို့ကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန် အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးပန်းကြမည်။ သူတုိ့နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်ထက် အများကြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုမျိုးကိုပေးကြမည်။ ဤသို့သာဆိုလျှင် တိုင်းပြည်၏အဖိုးတန်လှသော သယံဇာတရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် စွမ်းအင်နှင့်သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေတို့ကိုအလဟဿ ဖြုန်းတီးလိုက်သလို ဖြစ်လိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ထိုအရာတို့သည် ဒေသခံများအတွက်ပင် မလုံလောက်ပေ။ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်သစ်များကို အချိန်တိုအတွင်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်သေးပဲ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ရဦးမည်ဖြစ်ရာ ငွေအများကြီးမတတ်နိုင်သည့် ဒေသခံလူထု အတွက် လက်လှမ်းမီဖြစ်ရပေလိမ့်ဦးမည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းကို လေးလေးနက်နက် ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ချမ်းသာသောခရီးသွားများနှင့် ဆင်းရဲသော ပြည်သူများ တွေ့ကြသည့်အခါမျိုးတွင် အလွန်မညီမျှသော မှီခိုမှုကို ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်လျှင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အများစုသည် လိင်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ပြုမှုများ၊ လူကုန်ကူးမှုများ၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် တိုင်းပြည်တွင်း မညီမျှသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အဦများဖြစ်သည့် ဟိုတယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ မပေးနိုင်သည့် ဝေးလံခေါင်းပါးသော ဒေသများ၊ လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းရှိသည့် လူရှာမရသည့် ဒေသများထက် ခရီးသည်အလာများသည့် ဒေသများကိုသာ ပိုမိုအကျိုးရှိစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလို ဒေသမျိုးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုကွာဟချက်မှာ ပိုကြီးလာလိမ့်မည်။ တိုင်းပြည်၏အချို့နေရာများတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ နေထိုင်မှုပုံစံမျိုးအတိုင်း နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့သောဒေသမှ သူများအတွက်မူ နှစ်ပေါင်း ၅၀ မျှ ခေတ်နောက်ကျကျန်နေခဲ့လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောရမည်ဖြစ်သော်လည်း အနိမ့်ဆုံးမဟုတ်သည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ (ဒေသခံပြည်သူများ လျော်ကြေးလုံလုံလောက်လောက်မရဘဲ မိမိတို့မြေယာများမှ မောင်းထုတ်ခံရမည့်အန္တရာယ်နှင့် အဓမ္မလုပ် အားပေးခိုင်းစေခံရမည့် အန္တရာယ်မျိုးဖြစ်သည်။) လုပ်ငန်းခွင်သာယာမှုမရှိသည့် လုပ်ငန်းများ (လူမှုရေးအထောက်အပံ့မရှိသည့် ကာလတိုလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ) တွင် ခိုင်းစေခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်လည်းရှိပါသည်။
တိုင်းပြည်ကိုတံခါးဖွင့်လိုက်ပြီး ဧည့်သည်များဝင်ရောက်လာကာ သူတို့နိုင်ငံကို ချီးကျူးပြောဆိုကြမည်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားက ၀မ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အန္တရာယ်များကို မမြင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်အထိတော့ မထုံမအ သင့်ကြပါ။ ပြန်လည်ပြုပြင်မရနိုင်လောက်အောင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့မှုများ အခြားနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မဖြစ်ပွါးနိုင်၊ ကာကွယ်ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု မယုံကြည်ကြစေချင်ပါ။ အစိုးရမူဝါဒများသည် ဒေသခံတို့၏ အကျိုးစီးပွါးကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ကို အတော်များများတွင်တွေ့ရပါသည်။ သို့သော်အခြားနိုင်ငံများတွင် ကြုံခဲ့ရသလိုပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ အချို့ လူများ၏ အကျိုးစီးပွါးများသည် ကျန်သူများထက်ပိုမိုအကာအကွယ်ရပါလိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ရှေးရှုသွားနေသည်ဟု အများအပြားကပြောကြသည်။ ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ အစိုးရများနှင့် ပါလီမန်လွှတ်တော်များထဲတွင် သာမဟုတ် လူထု၏ ရင်တွင်းတွင်လည်းရှိသည်ဆိုသည်ကို အတော်များများ နားမလည်ကြပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုသည်ကို အခြေခံအကျဆုံးမူဖြစ်သည့် ညီမျှခြင်းတည်းဟူသော မူပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ညီမျှခြင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားခွင့်မရခဲ့သော နိုင်ငံများတွင် ဤမူကိုမကြာခဏပင်နားမလည်ကြပါ။
၂၀၀၂ ခုနှစ်က ကိပ်တောင်းမြို့တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ဖရင့်တရပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ပါ ပင်မစံသတ်မှတ်ချက်ပါဝင်သည့် ကြေငြာချက်တရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဘ၀များနှင့် စီးပွားရေးကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်း၊
ဒေသခံများအတွက် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ ပိုမိုရစေခြင်း၊ လူမှုဘ၀များ ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေခြင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရစေခြင်း၊
မိမိတို့၏လူနေမှု၊ ဘ၀အခြေအနေများအပေါ်သက်ရောက်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ဒေသခံများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရှိစေခြင်း၊
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ မတူကွဲပြားသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွင် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုခြင်း၊
ဒေသခံများအပေါ် နားလည်မှု၊ ဒေသခံရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုဘ၀များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ခရီးသွားများအား သိရှိနားလည်စေပြီး ဒေသခံများနှင့် ထိတွေ့စေခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း၊
ခန္ဓာကိုယ်မသန်စွမ်းသူများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
ဒေသခံများနှင့် ခရီးသွားများအကြား ရှိတတ်သည့် ယဉ်ကျေးမှုအရ ထိရှလွယ်သောအချက်များ၊ လေးစားသမှုပေးရသော အခြေအနေများကိုသိရှိနားလည်စေခြင်းဖြင့် အဆိုပါဒေသ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ဖြစ်ထွန်းစေခြင်း၊
- Cape Town, 2002
ဤအချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်ထားရှိနိုင်မည့် စံပုံစံ တရပ်ကိုသာ ဖော်ပြနေကြောင်းမှာထင်ရှားပါသည်။
လက်တွေ့တွင် ဤစဉ်းမျဉ်းများကို ကျင့်သုံးစေရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပြဿနာတိုင်းကို မြင်နိုင်သည်မဟုတ်ပဲ လူအများအပြားအနေဖြင့်လည်း ထိုပြဿာနာများကို အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အပြင်ပန်းပုံဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားလိုကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တာဝန်သိသော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အကျိုးခံစားခွင့်များကို မြန်မာပြည်သူများအား အညီအမျှခွဲဝေပေးရာတွင်သာ အထောက်အကူပြုသည် မဟုတ်ပဲ ခရီးသွားဧည့်သည်များကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာစေပါလိမ့်မည်။
ဒေသခံအမွေအနှစ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုပဲ ဒေသခံများအနေဖြင့်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာစေမှုများမရှိကြောင်းသိရှိရပါက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများစုအနေဖြင့် သူတို့အားလပ်ရက် လည်ပတ်ရသည်ကို ကြည်နှုးဝမ်းမြောက်ကြကြောင်း သုတေသနစစ်တန်းများကပြဆိုနေပါသည်။
သင်သည် ခရီးသွားလမ်းညွန်တဦးလော၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသူ တဦးလော?
သင့်မျက်စိကိုဖွင့်ထားပါ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ သင်သော်၎င်း၊ မြန်မာလူထုသော်၎င်း ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည်များကိုတွေ့ပါကMyanmar Tourism Watch သို့တိုင်ကြားနိုင် ပါသည်။ တိုင်ကြားချက်ကို အမည်မဖော်ပဲ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး တိုင်ကြားသူ၏ အမည်သော်၎င်း ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုံးနံပါတ်များကိုသော်၎င်း မည်သည့်အခါမျှ အခြားသူများသို့ ကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်မဟုတ်ပါ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးနေသူဖြစ်ပါက သင့်အလုပ်တည်မြဲ လုံခြုံရေးသည် နိုင်ငံခြားပြိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့် မထိခိုက်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများသည် လက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာရှိရေးသည် သင့်အတွက်အရေးပါသော အကျိုးစီးပွါးဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့် မြန်မာလူထုထိခိုက်နစ်နာရသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်သော်၎င်း သင့်မိတ်ဆွေများမှတဆင့်သော်၎င်း ကြားသိတွေ့မြင်ရပါက ဤဖြစ်ရပ်များကို Myanmar Tourism Watch သို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သင့်မိတ်ဆွေများကို ရှင်းပြပါ၊ ဤပြဿနာများအကြောင်း သင့်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ။ ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖြစ်နေသလိုပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း နိုင်ငံခြား ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အဓိက အကြောင်းအချက်ကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ လူအများအပြား၏ဘ၀ကို ထိခိုက်လာစေပါလိမ့်မည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူ မဟုတ်သူများကို ပင်ထိခိုက်စေပါလိမ့်မည်။
ဒင်္ဂါးပြား၏ နှစ်ဘက်စလုံးမှ အကြောင်းများ အဆိုးအကောင်းများကို စာဖတ်သူကို အသိပေးပါ။ နိုင်ငံတကာသတင်းများကို ကူးယူတင်ပြခြင်းမျိုးသာ မလုပ်ပါနှင့်၊ ဒေသခံ ပြည်သူများကသာ ပြည်သူလူထု၏ တကယ့်အကျိုးစီးပွါးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သူများဖြစ်ခြင်းနှင့် ဒေသအကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသတင်း အချက်အလက်များသည် စီးပွါးရေးစာရင်းအင်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလက်ကမ်းကြော်ငြာများတွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
သင့်တွင် ဘလော့ရှိပါက အထက်ပါပြဿနာများအကြောင်း ရေးပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ကြားသိတွေ့မြင်ရသည့် သီးသန့်အကြောင်းများလဲ ရေးပါ။ မမြင်မတွေ့နိုင်အောင် လုပ်ထားခံရသည့် ပြည်သူများ၏အသံကို အများကြားရအောင်လုပ်ရေးသည် အရေးကြီးပါသည်။
မြန်မာပြည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အားလုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရရေး လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
The first video appears with kind permission of iSeeiTravel. Subtitles by Burma Center Prague.